R/wasaare Farmaajo oo is-casilay, sheegayna in uu u tanaasulay ummadda Soomaaliyeed. – Radio Daljir
R/wasaare Farmaajo oo is-casilay, sheegayna in uu u tanaasulay ummadda Soomaaliyeed.
Juunyo 19, 2011 12:00 b 0
Muqdisho, June 19- R/wasaarihii dawladda federaalka KMG ah ee Soomaaliya ayaa goordhawayd ku dhawaaqay in uu iska casilay xilkii R/wasaarenimo ee Soomaaliya, sheegayna in uu tallaabadaay u qaatay tanaasul Soomaalinimo.
R/wasaare Maxamed C/llaahi Farmaayo, ayaa is-casilaaddiisa uga dhawaaqay shir jaraa?id oo isaga iyo m/weyne Shariif Sh Axmed ay maanta si wadajir ah ugu qabteen aqalka madaxtooyada ee Villa Soomaaliya.
R/wasaaraha ayaa is-casilaaddiisa ku micneeyey in ay ku qotonto sidii looga bixi-lahaa muran iyo is-maandhaafka siyaasadeed ee muddana ka dhax-aloosnaa golayaasha dawladda federaalka KMG ah ee Soomaaliya, isagoo dhinaca kalena sheegay in uu u tanaasulay ummadda Soomaaliyeed ee muddada jaah-wareesanayd, kana daashay is-qabqabsi-dawladeed.
Farmaajo waxaa uu hay?adaha dawladda ka dalbaday in la sii xoojiyo dadaalkii xukuumaddiisu ay ku tallaabsaday dhawrkii bilood ee ay jirtay, waxaana uu dhinaca kale codsaday madaxda dawladda in wax laga baddalo heshiisii Kampla iyadoo la tixgalinayo cabashooyinkii dadweyne ee Muqdisho ka dhacay.
Dhinaca kale M/weynaha dawladda federaalka KMG ah ee Soomaaliya Shariif Sh Axmed ayaa isna u mahad-celiyey R/wasaare Maxamed C/llaahi Farmaajo isagoo ku tilmaamay in uu qaatay go?aan-geesimo shacabka Soomaaliyeedna u horseedi karta midnimo iyo isku duubni waa sida uu hadalka u dhigaye. Sh Shariif ayaa sidoo kale wax-qabad la taaban karo ku tilmaamay tallaabooyinkii xukuumadda Farmaayo ay qaadday muddadii ay jirtay.
Is-casilaadda R/wasaare Farmaajo ayaa timid waqti aad looga walwalsanaa halka ay ku biyo-shuban doonta xaaladda dawladda federaalka KMG ah ee Soomaaliya kaddib markii uu cirka isku shareeray khilaafka u dhaxeeyey madaxda sare ee dawladda, waxaana is-casiladdiisu ay hoosta ka xarriiqday dhaqan-galka heshiiskii Kampala.
Baahin: Isniin, Jun 20, Weriye Maxamed C. Kooshin ~ Daljir ~ Garowe. Muran ka dhashay shir ka dhacay Villa Somaliya oo lagu magacaabi lahaa R/wasaare cusub; Dagaal khasaare gaystay oo ka dhacay gobolka Gedo; Xil. Seeko oo is-casilaada R/wasaare Farmaajo ku tilmaamay mid dan u ah ummadda Somalida; Issimada gobollada Sool, Sanaag & Cayn oo dhalleeceeyey dhaqdhaqaaqyada ciidan ee Somaliland ay ka wado gobolka Cayn, sheegayna in aanay ka qayb galayn shirka Widhwidh.
Denmark oo 24 nin oo burcad-badeed Soomaali ah u gacan-gelinaysa Kenya si loogu maxkamadeeyo.